I-Ultrasonic Deagglomeration - Hielscher
Isihloko sokusetshenziswa: "I-Ultrasonic Deagglomeration"
I-Deagglomeration ichaza inqubo yokuqhekeka noma yokusabalalisa izinhlayiya ezihlanganile, ezihlanganayo noma ezakha amaqembu. Amandla we-Interparticle angahlukaniswa ngamaqembu amabili: Amandla okubambelela anjenge-van der Waals, ukukhanga kwe-elekthronikhi namandla kazibuthe, ukufakwa komshini kanye nezibopho zamakhemikhali ezidinga ukungabi bhuloho olubonakalayo phakathi kwezinhlayiya. Amabhuloho aqinile, amabutho angama-capillary bonding kanye ne-immobile
amabhuloho e-liquid asuselwa ekwakhekeni kokuxhumeka okuqinile phakathi kwezinhlayiya.
I-Ultrasonic deagglomeration kanye nokuhlakazeka kuyindlela enamandla yokugqekeza izinhlayiya eziyizinkulungwane futhi ihlanganisa zibe zinhlayiya ngazinye futhi kuphumele ekumenieni okufanayo. Insimu ebalulekile yesicelo sokuhlakazeka kwe-ultrasonic ukuhlakazwa kwama-nanoparticles afana ne-carbon nanotubes, i-silica, i-alumina, i-titanium dioxide noma i-magnetite.
I-acoustic cavitation, umgomo osebenzayo ngemuva kwe-ultrash deagglomeration ne-milling, yakha amandla amakhulu e-shera hydraulic, onqoba izibopho ze-inclarticle futhi akhuthaze ubuhlakani bezinhlayiya ezihlangene kuma-nanoparticles ahlakazekile.
Funda kabanzi mayelana nokuhlakazwa kwe-ultrasonic, deagglomeration kanye nokugaya okumanzi kwezinhlayiya ze-nano-!